Ogaden News Agency (ONA) – Noora Afrgaab : Cabdi Iley markii maxkamad shacbi ah la saaray !
Noora Afrgaab : Cabdi Iley markii maxkamad shacbi ah la saaray !
Posted by ONA Admin	/ May 16, 2014
Cabdi Iley dhibaatada uu shacabka u gaystay taariikhda ayaa xusi doonta. Qofkasta oo leh damiir aadminimo iska daa mid islmanimee oo taagnaa shalay markuu Cabdi iley kasii daayay xabsiga ku caan baxay Jeel Ogadeny boqolaal dhalinyara ah waxaa hubaal ah inuu indhihiisa ka tirtirayay ilmo. Boqolaal dhalinyara ah oo badankood ay ama dhinteen isla shalayba ama uu hubay Cabdi iley markuu sii daynayay inay u dhiman doonaan macaluul iyo cuduro ka dhashay nafaqa darro iyo jidh dil ayaa ka soo baxay xabsigaa.
Dadkii arkay dhalinyaradaa waxay xalay ku sheekaysanayeen meesha ay salka ku hayso colaada uu u hayo Cabdi iley tolkii, waa hadday isku tol yihiine. Ma dhici karto qof bani aadam ah inuu sidaa ula dhaqmo dad uu wada garanayo oo eheladiisa ah oo diin iyo wada dhalashoba ay wadaagaan. Sawirka dadka halkaa laga soo daayay taariikhda aadanaha ee la xasuusto laguma hayo, xataa Naziga la sheego inuu ku laayay Yuhuuda iyo dadyow kale xeryaha loo yaqaano – Conacentration Camps – waxaa ka dhafoor xumaa dadka xabsigaa uu kasoo daayay Cabdi iley.
Odayaal badan oon wareystay ra’yigooda waxay isweydiinayeen; Yaa Yidhi Cabdi Iley waa Somali? Kuwa u qiil bixinayay ayaa iyagu lahaa arintan waxaa ka dambeeya oo galiyay Cabdi iley Ina Labago’le iyo kooxdiisa, ee isagaa wuu dhaama kuwaa. Hasa ahaatee waxay iyaguna raacinayaan Cabdi iley wuu ogaa dhibaatada dadkaa ku haysata xabsiga wuuna ka sii dayn karay ee waxaa ku dhacday cudur ah ONLF ayaan soo afjarayaa, marka masaakiinta ugu xareysan Jeelka wuxuuba u haystaa inay yihiin ciidankii ONLF oo miidhan.
Labada dhanba, kuwa taageerayay iyo kuwa colaada u qaadayba waxay isku raaceen in Cabdi iley uu mariyay Somalida Ogadenya wax aanay waligood sheeko iyo shaahid ku arag. Inuu fahamsiiyay macnaha Gumaysi oo aanay horey u aqoonin.
Waxaa socota mawjad ah in laga tashado sidii shacabka isaga badbaadin lahaayeen dhibaatada ay ku hayaan wiilasha uu hubka u dhiibay oo laga soo wariyay inuu amar ku siiyay inay dadka xoolahooda ku noolaadaan, ka dib markii dawladda dhexe ay joojisay lacagtii xad dhaafka ahaa ee lagu cuni jiray mashruucan Liyu-Boolis (Hawaarin) oy dhamaatay mudadii ay qabsadeen Jenenada Tigreega iyo Cabdi iley ee ahayd inay ku soo afjarayaan jiritaanka ONLF. Dhibaatada ugu badan waxay ka socdaan hadda gobolada Awaare iyo Nogob halkaasoo ay Hawaarintii joogtay boobeen xoolahii dadweynaha oo qaarna ay xeryaha ku qalanayaan qaarna ay suuqyada Waqooyi usoo kaxeeyeen. Dadka shacabka ah ayaa hadda ku jira is-abaabul siday isaga difaaci lahaayeen dhacan iyo boobka joogtada ah.